Lionel Messi ayaa sheegay inaanu doonaynin inuu ku guulaysto koobka aduunka haddii sababtu tahay inuu noqonayo laacibkii ugu wanaagsanaa ee dunida soo maray abid.
Ciyaaryahankan 4 ta goor loo cumaamaday abaal marinta laacibka ugu wanaagsan dunida ee Ballon d’Or, ayaa hore loola simay inuu gaadhay meeqaamkii Pele iyo Maradona, laakiin nasiib daro sida labada ciyaaryahan ee dunida astaanta u ah, aan wali ku guulaysanin bilada tartanka ugu qiimaha badan dunida ee Koobka aduunka.
Dad badan ayaa qaba in xidigan reer Argentina uu u baahan yahay inuu koobka aduunka qaado si uu u dhamaystiro halyeynimadiisa, laakiin weeraryahanka Barcelona isagu fikir ka duwan kaas ayuu aaminsan yahay.
“Waxay ila tahay, waxa jira ciyaaryahano badan oo u arka inay noqon karaan ciyaaryahanka ugu wanaagsanaa caalamka abid, iyagoon qaadin koobka aduunka,” ayuu yidhi 26 jirka Barca.
“Laakin had iyo jeer inaad hanato koobka aduunku waa arin qof kasta jecel yahay, waxaanay ii ahaan lahayd fursad weyn oo muhiim ah.
“Waxaan rajaynayaa inaanu gaadhno Rio [garoonka ciyaarta Finalka koobka aduunka ee Brazil 2014 ka dhacayso] oo aan ku damaashaadno maalintaas halkaa. Rajo weyn baanan ku qabaa, inaanu gaadhi karno finalkaas.”
Waxa jiray warar la isla dhex marayay dhawaanahan oo tilmaamayay in Messi dareenkiisa oo ku xawilmay ciyaaraha koobka aduunka iyo sidii uu wadankiisa meel fiican u gaadh siin lahaa sanadkani, ay hoos u dhac weyn ku keentay qaab ciyaareedkiisii Barcelona ee xili ciyaareedkan, wuxuuse sheegay inaanu in badanba ka fikirin tartankaas ee uu sugayo oo kaliya.
“Runtu waxay tahay, ka fikir badanba ma siiyo tartankaas,” ayuu ciyaaryahanka lumberka 10 aad ku adkaystay. “Ma sii sawiran karo, laakiin waxaan ogahay in Brazil ay noqon doonto meel ay soo buux dhaafiyaan Taageerayaasha reer Argentina, u dhawida ay u dhawdahay darteed.
“Wuu jiraa damaca ah inaanu shacabkaas u rumayno riyadooda.”
LIVE FA CUP FINAL: Arsenal vs Hull – Gunners oo Ku taamaya Inay Jebiyaan rikoodh ka Man United ee 11 FA Cup
Isku Aadka FA Cup Oo La Shaaciyey, Wakhtiga La Ciyaarayo Iyo Siday Kooxuhu Isugu Beegmeen
Cajiib! Ra’iisal Wasaaraha Spain Oo Diiday In Real Madrid Soo Iibsato Neymar
Liverpool vs Chelsea 1-1 Extended Highlights HD 2017